Golaha Wakiilada Puntland oo meelmariyey miisaaniyadda maamulka ee 2014 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe – Mareeg.com: Golaha Wakiillada maamulka Puntland ayaa 6/4/2014 meel-mariyey miisaaniyada sanadka 2014 ee maamulka madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali soo gudbiyey kadi dood dheer oo ay ka yeesheen.
Waxaa kulanka Golaha Wakiillada manta soo xaadiray 50 xildhibaan, waxaana cod gacantaag ah miisaaniyada ku ansixiyey 46 mudane.
Gudoomiyaha baarlamanka Puntland, Siciid Xasan Shire ayaa ku dhawaaqay go’aanka baarlamanka ee ah ansixinta miisaaniyada, wuxuu sheegay in la saxay khaladaad dhowr ah oo ku jiray miisaaniyada ay soo gudbisay wasaaradda maaliyada.
Miisaaniyada la asnsixiyey ayaa dhan $30.678.192 dollar, waxaana Maxamed Faarax Nuux oo ah gudoomiyaha guddiga maaliyada baarlamanka sheegay in lacagtii hore ee baarlamanka loo soo gudbiyey ay ahayd $3.4 Milyan dollar, waxayna ku dhacday khalad qoraal, sida uu yiri.
Golaha Wakiilada Puntland ayaa ku gudajira kalfadhi aan caadi ahayn, waxaana kalfadhigaas loo qabtay si baarlamaanka uga hadlo arrimo dhor ah oo horyaalla.